FBC - Kuwaataar lammileen biyyoota 80 viisaa malee biyyattii akka seenan eyyamte
FBC Wiixata Adooleessa 9 2010 E.C. - Monday, July 16 2018 G.C.
Kuwaataar lammileen biyyoota 80 viisaa malee biyyattii akka seenan eyyamte
Finfinnee, Hagayya 04, 2009 (FBC) Kuwaataar sagantaa lammilee biyyoota 80 olii viisaa malee gara biyyattii akka dandeessisu ifoomsuushee beeksifte.
Dohaan jeequmsa geejiba xiyyaaraa fi tuurizimii isheerra qoollifannaa biyyoota olla –galoo galaanaan irra qaqqabee si’eessuuf sagantaa kana ifoomsuushee Ministeeri Dhimma Biyya Keessaa Kuwaataar beeksiseera.
Akka hojimaata haaraa kanaatti lammileen biyyoota Yuuroop, Indiyaa , Libaanos, Niwzilaand, Afriikaa Kibbaa fi Ameerikaanotaa dabalatee lammileen biyyoota hedduu warqaa eenyummaa haadarbuu/dabartuu qofa agarsiisuun Kuwaataariin seenuu nidanda’u jedhameera.
Lammileen biyyoota 33 Kuwaataar keessa guyyoota 180f viisaa malee turuu kan danda’an yoo ta’u, lammileen biyyoota 47 ammoo guyyoota 30 turuu akka danda’an beeksifteetti.
Waajjira Tuurizimii Kuwaataritti ‘Ofiisarri’ Olaanaa Misooma Tuurizimii Hasan Al Ibraahim Dohaan lammileen biyyoota kaanii viisaa malee akka seenan eyyamuunshee naannichatti biyya balbala ishee daawwattootaaf banaa goote ta’uushee kan mul’isudha jedhaniiru.
Saawud Arabiyaa, Baahireen fi Emireetota Arabaa Gamtoomanii ji’a Waxabajjii darbe shororkeessummaa nideggarti kan jedhuun hariiroo dippilomaasii Kuwaataar waliin qaban addaan kutuun isaanii kan yaadatamudha.
Dohaan dhimmi kun sirrii miti jettus biyyoonni arfan Saawudiin geggeffaman hariiroo geejibaa Kuwaataar waliin qaban hunda cufanii turani.
Kanaanis balaliiwwan Kuwaataar Eer Weeys biyyattiin irratti hirkattu jeeqamuusaan miidhaan olaanaa qaqqabeera.
Ollootasheen kan qoollifatamte Dohaan, hariiroon daldalaa fi dippilomaasii akka itti-fufuuf carraaqaa turteetti.
Lammileen biyyoota kaanii Viisaa malee gara biyyattii akka seenan eyyamuunshee ammoo karoora yeroo dheeraa keessatti dinagdee bilisaa ijaaruuf qabatte milkeessuuf akka ta’etti lakkaa’ama jedhameera.
Kuwaataar wayita ammaa dhiheessii nyaataa Tarkii fi Iraan irraa galchaa kan jirtu yoo ta’u, galteewwan ijaarsaa ammoo sarara Galaana Omaaniin fichisiisaa jirti.
Oduuwwan Biroo « Kooriyaan Kaabaa miisaa’ela 4n Guwaam tumuu yaaddetti	Bokoo Haraam dubartoota hedduu ergama badanii balleessuutti bobbaasuun adda-duree ta’uunsaa ibsame »